खोप केन्द्र नपुग्दै बाटैबाट कोरोना खोप गायब : भारतीय नागरिकलाई विक्री गरेको खुलाशा ! | Diyopost
खोप केन्द्र नपुग्दै बाटैबाट कोरोना खोप गायब : भारतीय नागरिकलाई विक्री गरेको खुलाशा !
काठमाडौं, ५ साउन । केहीदिन अघि काठमाडौं महानगरपालिकाले क्षेत्रपाटी चिकित्सालयमा कोरोना विरुद्धको खोप ‘भेरोसेल’ पठायो । खोप केन्द्रमा नपुग्दै १ सय ७० डोज गायब भयो । यता खोप लगाउन यसअघि नै बोलाइएका उमेर समुहका व्यक्तिहरु आइसकेका थिए । खोप लगाउँदै गर्दा १ सय ७० डोज अपुग भएपछि खोप हराएको सुचना एकाएक बाहिरयो ।
खोप केन्द्रमा आएको खोप केन्द्रमा नपुग्दै गायव भएपछि यतिबेला सरोकारवाला निकाय खोजीमा छन् । तर, उक्त खोप कहाँ पुग्यो भन्ने भेटिएको छैन । तर, विश्वस्त शुत्रका अनुसार यसरी हराउने गरेको खोप कालोबजारी हुन थालेको छ । सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा खोप कालोबजारी हुन थालेको स्रोतले जनाएको छ । सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा ती खोपहरु नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर विदेशिने भारतीयहरुलाई विक्री गरिएको स्रोतले बतायो ।
उनीहरुले भारतीय नागरिकलाई प्रति डोज २० हजार रुपैयाँको दरले विक्री गरिँदै आएको छ । विभिन्न निकायले मौखिक उजुरी गरेपनि सम्बन्धित निकायले कुनै छानबीन नगरेको सरोकारवालाले जनाएका छन् । यद्धपी काठमाडौं महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य प्रमुख हरि कुँवर भने खोप कालोबजारी नभएको बताउँछन् । ‘मैले यो घटना पहिलो पटक सुन्दैछु । त्यस्तो हुनसक्दैन,’ उनले भने,‘हामीलाई हरेक दिन यस्तो रेकर्ड आउँछ ।’
तर, विश्वस्त सुत्रले भने कुँवरकै मिलेमतोमा खोप गायब पारिने घटना बढेको छ । खोप गायब पारिने घटनाको विषयमा प्रहरीलाई समेत जानकारी गराएपनि प्रहरीले चासो नदिएको स्रोत जनाउँछ । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन स्वास्थ्य मन्त्रालयका सुचना अधिकारी गणेश श्रिवास्तवलाई सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।
चीनमा व्यापार गरेर भारत फर्किएका भारतीय व्यापारीलाई भेरोसेल खोप लगाएर मात्रै चीन आवागमन गराइन्छ । तर, भारतमा चीनियाँ खोप भेरोसेल लगाउन प्रतिबन्ध छ । भारतले नै उत्पादन गरेको कोभिडसिल्ड खोप मात्रै भारतमा लगाउन पाइनेछ । तर, नेपालमा भने कोभिडसिल्ड, अमेरिकन खोप जनसन एण्ड जनसन र भेरोसेल नै लगाइने गरेको छ । भारतबाट चीन जाने भारतीय व्यापारीहरुले नेपालमा आएर प्रति डोज २० हजार रुपैयाँ तिरेर भेरोसेल लगाउने गरेको उच्च स्रोतले बतायो ।
केही महिना अघि प्रदेश १ सरकारले भारतीय व्यापारीलाई चिनिया खोप वितरण गरि त्यहाँको नागरिकलाई खोपबाट बञ्चित गरेको भन्दै आन्दोलन नै भएको थियो । प्रदेश एककी सामाजिक विकास मन्त्री उसाकला राई उक्त घटनापछि विवादित बनेकी थिइन् ।